ဆောက်သမ်တန်ပွဲမှာ ဖရက်မပါရင် မန်ယူနောက်တန်းဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာပြောပြခဲ့တဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ် – FBV SPORT NEWS
ဖရက်မပါရင် မန်ယူအသင်းနောက်တန်းဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာပြောပြခဲ့တဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ်
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်စ် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၀) အဖြစ်လာမယ့်29ရက်နေ့တွင် ဆောက်သမ်တန်အိမ်ကွင်းမှာ သွားရောက်ကစားရပါမယ်…အဲ့ဒီပွဲမှာ မန်ယူကစားသမားဟောင်း ဂယ်ရီနဗီးလ် က ဖရက်မပါရင် မန်ုယူနောက်တန်းဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာကို သုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်စ်ဟာ အဲလက်တဲစ် နေပြန်ကောင်းလာပြီး အက်စတန်ဘူနဲပွဲအပြီးတွင် အားကစားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်းများက ဆိုးရှားရဲ့ Weapon Player ကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်..
ဂယ်ရီနဗီးလ်ကတော့ မန်ယူ နောက်တန်းအခြေနေကို စိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်..ဖရက်မပါခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ မန်ယူနောက်တန်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ်….နဗီးလ်က ” ကျနော်တို့ ဖရက်အကြောင်း မပြောခင် အရင်တုန်းက ပက်စ်ကို သတိရကြသေးလားဗျာ…ကျနော်တော့ ပက်စ်ကိုအမြဲသတိရတယ်….
မန်ယူအမှာ အဆုတ်နလုံးနဲ့ကစားသမားနော် တောင်ပံတိုက်စစ် ကွင်းလယ် ဗဟိုတိုက်စစ်အကုန်မမောမပန်းလိုက်ကစားပြီး ဇွဲကြီးတဲ့လူဗျ…..အခု ဖရက်လည်း အာ့လိုဘဲ ကွင်းလယ်အဖျက်ရော ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ကော အကုန်လိုက်ကစားတဲ့ကစားသမား မပါရင်
ဘာဖြစ်သွားမလဲ ကြည့်ဗျာ….သူလည်းပက်လိုဘဲ မမောမပန်းနဲ့ ကစားနိုင်တဲ့ ကစားသမားဘဲ ဗျ….လင်ဒီလော့၊မက်ကွီုင်းယားတို့ ဗဟိုခံစစ်က ဖရက်ရှိနေလို့သက်သာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်…ဖရက်စ်ပါတဲ့ မန်ယူကွင်းလယ်ဟာ မာတစ်တို့ တော်မီနေးတို့ ရှိနေရုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံနေပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး….
ဆိုးရှားလ် Game Plan ကောင်းမယ်ဆိုတာကိုတော့ ယုံကြည်ပေးနိုင်ပါတယ်….ဖရက်မပါတဲ့ကွင်းလယ်ဟာ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့တော့ မြင်မိပါတယ် လို့ BT Sport News မှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်…